မြိတ်မြို့တွင် အသက်မပြည့်သည့် မိန်းကလေးငယ်အား ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမည်ပြောကာ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ပြီး အွန်လိုင်းတွင် ဗီဒီယိုဖိုင်တင်ခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံဆရာများကို ချိတ်ဆက်ပေးသူအား ထပ်မံဖမ်းဆီး - SKY Media
မြိတ်မြို့တွင် အသက်မပြည့်သည့် မိန်းကလေးငယ်အား ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမည်ပြောကာ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ပြီး အွန်လိုင်းတွင် ဗီဒီယိုဖိုင်တင်ခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံဆရာများကို ချိတ်ဆက်ပေးသူအား ထပ်မံဖမ်းဆီး
January 13, 2021 January 13, 2021 unfollow	0 Comments
မြိတ်မြို့တွင် အသက်မပြည့်သည့် မိန်းကလေးငယ်အား ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမည်ပြောကာ သားမယား အဖြစ် ပြုကျင့်ပြီး အွန်လိုင်းတွင် ဗီဒီယိုဖိုင်တင်ခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံဆရာများကို ချိတ်ဆက်ပေးသူအား ထပ်မံဖမ်းဆီး လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
၁၄ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်အား မော်ဒယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမည်ဟု စည်းရုံးသိမ်းသွင်းပြီး လိင်ဆက်ဆံကာ ဗီဒီယိုဖိုင်ရိုက်ကူးခြင်း၊ အွန်လိုင်းတင်တွင် ဗီဒိုယိုဖိုင်တင်ခဲ့ခြင်း၊ မိန်းကလေးငယ်အား ဓာတ်ပုံ ဆရာများ နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးသူ မနုနုလှိုင် (ခ) မယ်နုကိုမြိတ်မြိ့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မနုနုလှိုင် (ခ) မယ်နုမှာ သားမယား ပြုကျင့်ခံရသူ မ…. ၏ နေအိမ်တွင် ဆိုင်အလုပ်သမား တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားသည့် အချိန်တွင် အခန်းထဲရှိ ရေချိုးခန်းတွင် ရှိနေကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
“မိန်းကလေးကို သားမယားပြုကျင့်ပြီး ဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဒီမိန်းမက ဟိုတယ်ရေချိုးခန်းထဲမှာ ရှိနေတယ်လို့ သိရတယ်။ ကိစ္စပြီးတဲ့အခါ မနုနုလှိုင်ကလည်း လိင်ဆက်ဆံတာကိုလုပ်ပြီး ဗီဒီယိုအရိုက်ခံတယ်၊ သူကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းပါဝင်သလို အသက်မပြည့်သေးတဲ့ မိန်းကလေးငယ်ကိုပါ ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အတွက် ဖမ်းဆီးပြီး အရေးယူလိုက်ပါပြီ’’ ဟု မြိတ်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အသက်မပြည့်သေးသည့် မိန်းကလေးငယ်အား သားမယား ပြုကျင့်ခဲ့သူများမှာ မြိတ်ခရိုင်၊ ပုလောမြို့နယ်မှ ထက်ဝင်းဖြိုး(ခ)ကိုထက် (ဓာတ်ပုံဆရာ)၊ မင်းခန့်ထူး၊ အောင်မင်းခန့် (ဓာတ်ပုံဆရာ၏ တပည့်များ) ဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့ကို မြိတ်မြို့မရဲစခန်းမှ (ပ) ၁၇/၂၀၂၁၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၆၃/၃၇၆/၁၁၄ တို့ဖြင့် အမှုဖွင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကာ ဆက်လက်စစ်ဆေးချက်အရ ယခုကဲ့သို့ ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မွိတျမွို့တှငျ အသကျမပွညျ့သညျ့ မိနျးကလေးငယျအား ဓာတျပုံရိုကျပေးမညျပွောကာ သားမယား အဖွဈ ပွုကငျြ့ပွီး အှနျလိုငျးတှငျ ဗီဒီယိုဖိုငျတငျခဲ့သညျ့ ဓာတျပုံဆရာမြားကို ခြိတျဆကျပေးသူအား ထပျမံဖမျးဆီး လိုကျကွောငျး သိရသညျ။
၁၄ နှဈအရှယျ မိနျးကလေးငယျအား မျောဒယျဓာတျပုံရိုကျပေးမညျဟု စညျးရုံးသိမျးသှငျးပွီး လိငျဆကျဆံကာ ဗီဒီယိုဖိုငျရိုကျကူးခွငျး၊ အှနျလိုငျးတငျတှငျ ဗီဒိုယိုဖိုငျတငျခဲ့ခွငျး၊ မိနျးကလေးငယျအား ဓာတျပုံ ဆရာမြား နှငျ့ ခြိတျဆကျပေးသူ မနုနုလှိုငျ (ခ) မယျနုကိုမွိတျမွိ့နယျရဲတပျဖှဲ့မှ ဇနျနဝါရီ ၁၂ ရကျတှငျ ဖမျးဆီးခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
မနုနုလှိုငျ (ခ) မယျနုမှာ သားမယား ပွုကငျြ့ခံရသူ မ…. ၏ နအေိမျတှငျ ဆိုငျအလုပျသမား တဈဦးဖွဈပွီး ဖွဈစဉျဖွဈပှားသညျ့ အခြိနျတှငျ အခနျးထဲရှိ ရခြေိုးခနျးတှငျ ရှိနကွေောငျး စဈဆေးတှရှေိ့ခဲ့ရသညျ။
“မိနျးကလေးကို သားမယားပွုကငျြ့ပွီး ဗီဒီယိုရိုကျနတေဲ့ အခြိနျမှာ ဒီမိနျးမက ဟိုတယျရခြေိုးခနျးထဲမှာ ရှိနတေယျလို့ သိရတယျ။ ကိစ်စပွီးတဲ့အခါ မနုနုလှိုငျကလညျး လိငျဆကျဆံတာကိုလုပျပွီး ဗီဒီယိုအရိုကျခံတယျ၊ သူကိုယျတိုငျ ပူးပေါငျးပါဝငျသလို အသကျမပွညျ့သေးတဲ့ မိနျးကလေးငယျကိုပါ ခြိတျဆကျပေးတဲ့အတှကျ ဖမျးဆီးပွီး အရေးယူလိုကျပါပွီ’’ ဟု မွိတျမွို့နယျ ရဲတပျဖှဲ့မှ တာဝနျရှိသူ တဈဦးက ပွောကွားသညျ။
အသကျမပွညျ့သေးသညျ့ မိနျးကလေးငယျအား သားမယား ပွုကငျြ့ခဲ့သူမြားမှာ မွိတျခရိုငျ၊ ပုလောမွို့နယျမှ ထကျဝငျးဖွိုး(ခ)ကိုထကျ (ဓာတျပုံဆရာ)၊ မငျးခနျ့ထူး၊ အောငျမငျးခနျ့ (ဓာတျပုံဆရာ၏ တပညျ့မြား) ဖွဈပွီး ၎င်းငျးတို့ကို မွိတျမွို့မရဲစခနျးမှ (ပ) ၁၇/၂၀၂၁၊ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၃၆၃/၃၇၆/၁၁၄ တို့ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ ဆောငျရှကျခဲ့ကာ ဆကျလကျစဈဆေးခကျြအရ ယခုကဲ့သို့ ထပျမံပျေါပေါကျလာခွငျး ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
← ကမ္ဘာပေါ်ရှိလေ တပ်များ၏်အခန်းကဏ္ဍများနှင့် ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေး များအကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း
ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြို့နယ် (၂၇) ခု ယနေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်မည် →
အီရန်တပ် ၏လေ့ ကျင့်ခန်းပြုလု ပ်စဉ်ေ ရငုပ်သင်္ဘောတစ်စီးအားေ ထာက်လှ မ်းတွေ့ ရှိခဲ့ခြင်း
မြန်မာပြည်အတွက် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး သတင်းကောင်းတစ်ခု…
ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ဝယ်ယူရန် ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်း က တတိယအကြိမ် ကျပ်သိန်း တစ်သောင်း လှူဒါန်း
အိန္ဒိယတွင် ကာကွယ်ဆေးအထိုးခံရန် ငြင်းဆန်မှုများ ရှိလာ၊ အစိုးရက စည်းရုံးရေးဆင်းနေရ